Maxay Ku Kala Nasiib Badan Yihiin 30 Jirka Somaliland Iyo 80 Jirka Soomaaliya?
Sunday October 31, 2021 - 14:09:44 in Wararka by Waaberi News
Dimuqraadiyadda Jamhuuriyadda Somaliland waxay xiligan gaadhay in dalalka jaarka inala ahi ay innagaga daydaan nidaamka xisbiyada badan iyo doorashooyinka qof iyo codka ah oo u ah cashar ay muddo dheer ku taamayeen oo aanay wali ka gaadhin hadafkii ay ka lahaayeen.
Doorashooyinka JSL waa qaar xor iyo xalaal ah, waxana lagu soo shirabay 7 doorasho 19kii sannadood ee la soo dhaafay. Doorashadii isku sidkanayd ee Wakiillada iyo deegaanka ee sannadkan ka qabsoontay dalku waxay ahayd tijaabo kale oo dimuqraadiyada Somaliland kaga gudubtay dalcad adag, kadib markii ay ka dabaalatay laba doorasho oo culayskooda lahaa oo dad badani aaminsanaayeen in Somaliland aanay gaadhin inay mar wada qabato laba doorasho oo wada socda oo ay u tartameen 798 Murrashax oo labada doorasho isu soo taagay.
Doorashadani waxay iftiimisay in hannaanka dimuqraadiyadda Somaliland uu iskii u hano-qaaday maadaama oo ay jeebadeeda ka bixisay dhaqaalihii ugu badnaa ee ku baxay doorashadaas oo goobjoogeyaashii caalamiga ahaa ku tilmaameen mid u qabsoontay si xor ah oo nabdoon.
Waxyaabaha Jamhuuriyadda Somaliland dheer tahay Soomaaliya iyo dalalka jaarka ah qaarkood, waxaa ka mid ah in soddon jirka u dhashay Jamhuuriyadda Somaliland uu fursad u helay inuu gacantiisa toddoba jeer ku soo doortay madaxweyneyaal, Goleyaal baarlamaan iyo kuwo deegaanba, hase ahaatee doorasho qof iyo cod ahi waa mid qariib ku ah Soomaaliya oo aan muddo lixdan sanno ku dhow aan haweysan inay gacantooda ku soo doortaan madaxdooda.
Maamul-goboleedka Puntland ee dalka Soomaaliya oo toddobaad ka hor galay doorasho deegaan oo ay ku tijaabiyeen saddex degmo, ayaa sida dhaqanka u noqotay soo min guuriyey xeerka doorashooyinka Somaliland iyo nidaamka xisbiyada badan oo kaga daydeen Jamhuuriyadda Somaliland.
Waxa kaloo ay meteleen habkii looga ololeyn jiray Somaliland, waxana Telefishannada ka soo muuqday Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni oo siday ahayd jillay qaabkii Guddoomiyaha xisbiga WADDANI Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi uu Khadka telefoonka uga dalbanayey codbixiyeyaasha inay codkooda siiyaan doorashadii madaxtinimada ee 2017kii.
Doorashadii isku sidkanayd ee Somaliland ka qabsoontay waxa isu diiwaangeliyey 1,065,847 codbixiye, iyadoo doorasho qof iyo cod ah ifafaalaha muuqda aanay Soomaaliya ku gaadhi karin rubuc qarni kale.
Waase gar iyo daw inay siddeetan jirka aan waligii madaxdiisa soo dooran ee ku sugan Soomaaliya, in wiilkiisuna aanu waayin xuquuqdii iyo fursadii aabihii seegay oo ay la yimaadaan caqliyad ay kaga baxaan burburka iyo dawlad la’aanta dishootay.
Ugu dambayn, waxaan leeyahay reer Somaliland ha sii xoojiyaan dawladnimadooda iyo inay ku sii taagnaadaan hanaanka dimuqraadiyada ee ay sida nabdoon awooda iskugu wareejiyaan madaxda dalku. Waana in laga fogaadaa wixii cunfi iyo cadho ku noqon kara dawladnimadeena sida dayaxa uga muuqata gobolka Geeska Afrika.
W/Q Cumar Maxamed Faarax